Etu ị ga - esi malite azụmaahịa mgbakwụnye | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị na-achọ ịzụlite azụmahịa ecommerce. Afọ iri gara aga, ịmalite usoro ikpo okwu ecommerce, ijikọta nhazi ịkwụ ụgwọ gị, ịgbakọ ọnụego ụtụ isi nke obodo, steeti, na nke mba, iwulite akụrụngwa ahịa, ijikọ ndị na-eweta mbupu, na iweta usoro ị na-eji arụ ọrụ iji megharịa ngwaahịa site na ire ere nyefe were ọnwa na ọtụtụ narị puku dollar.
Ugbu a, ịmepụta saịtị na ikpo okwu ecommerce dị ka Shopify or BigCommerce enwere ike ịrụzu n'ime awa karịa ọnwa. Imirikiti nwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ wuru nke ọma. Na nyiwe azụmaahịa ọgbara ọhụrụ dị ka Klaviyo, Omnisend, ma ọ bụ Moosend mkpọchi na-enweghị ihe ọ bụla ma pịa bọtịnụ.
Gịnị bụ Ndota?
Dropshipping bu ahia ahia ebe gi, onye na ere ahia, aghaghi idobe ma obu tinye aka ahia obula. Ndị ahịa na-atụ ahịa ngwaahịa site na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, ị ga-eme ka ndị na-ebu ngwaahịa gị mata. Ha na-emezi, ngwugwu, ma bufee ngwaahịa ahụ ozugbo na onye ahịa.
Ahịa ahịa nke ụwa na-aga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 150 ijeri n'afọ a ma ọ ga-abụ ihe karịrị okpukpu atọ n'ime afọ 5. 27% nke ndị na-ere ahịa weebụ agbanweela iji dobe ụgbọ mmiri dị ka ụzọ bụ isi ha si emezu iwu. Ghara ikwu 34% nke ahịa Amazon mezuru site na iji nkụkọ na afọ iri gara aga!
Na dropshipping nyiwe dị ka Nke Biputere, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmalite ịmepụta na ire ngwaahịa ozugbo. Ọ dịghị mkpa ka aka ngwaahịa, ma ọ bụ na-echegbu onwe banyere mmepụta… gị dropshipping azụmahịa bụ nanị gị ijikwa, optimizing, na-akwalite gị ngwaahịa online na-enweghị ndị ọzọ mgbagwoju.
Onye Nrụpụta Ihe na Weebụ wepụtara onye ndu ọhụụ ọhụrụ, Etu ị ga - esi malite azụmaahịa na - ebubata ego. Ihe ntuziaka infographic na-eji ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ na nyocha dabere na nghọta sitere na ndị ọkachamara Dropshipping anyị gwara okwu. Nke a bụ ihe ọ na-ekpuchi:
Ihe mbelata bụ na otu o si arụ ọrụ
Ndekọ ọnụ ọgụgụ kachasị ọhụrụ nke Mmetụta Ya
Usoro 5 iji bido azụmahịa azụmaahịa
3 Mmejọ na-adabaghị adaba iji zere
Mygha Echiche psgha nke Na-agbada
Isi Uru na ọghọm nke Dropshipping
Na-ejedebe site kingjụ: Should Kwesịrị ịdaba?
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọ njikọ m maka nyiwe ndị akpọrọ n'isiokwu a.
Tags: na-akụdaInyocha ihe ndoziọnụ ọgụgụ nkwụsịinfographicwebụsaịtịbuilderexpert